Puberty (လူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်း သို့ အရွယ်ရောက်ခြင်း) - Page 12 of 19 - Hello Sayarwon
Dr.Aye Myat Myat Noe မှ ရေးသားသည်။2ပတ် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Puberty (လူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်း သို့ အရွယ်ရောက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွယ်ရောက်သောအချိန်ကိုဆိုလိုတယ်။ လူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းဆိုတာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေမှာ မျိုးပွားနိုင်စွမ်းရှိလာတဲ့အခြေအနေထိရောက်အောင် အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှု၊ သက်ဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရုပ်တွေဖွံ့ဖြိုးလာမှုကိုခေါ်တယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဇီဝရုပ်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဖြစ်ပြီး ထိုပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း သက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်။
Puberty (လူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်း သို့ အရွယ်ရောက်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
လူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော်စဝင်တဲ့အချိန်ဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကွဲပြားပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေမှာ ၁၀ နှစ်နဲ့ ၁၄ နှစ်ကြားဖြစ်တတ်ပြီး ယောက်ျားလေးတွေမှာတော့ ၁၂ နှစ်နဲ့ ၁၆ နှစ်ကြားမှာဖြစ်တတ်တယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မိန်းမငယ်လေးတွေဟာ အရင်ကထက်ပိုပြီး စောစောအပျိုဖော်ဝင်လာတာကို တွေ့လာရပါတယ်။ ထိုပြောင်းလဲမှုဟာ စားသောက်မှုပုံစံနဲ့ တခြားပတ်ဝန်ကျင်က လွှမ်းမိုးမှုတွေနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။
Puberty (လူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်း သို့ အရွယ်ရောက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မိန်းကလေးတွေမှာ ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ ရင်သားဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဖြစ်တယ်။ ထိုအချိန်မှာ ရင်သားနာကျင်တာမျိုး၊ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ဖွံ့ဖြိုးမှုအချိန်မတူတာမျိုးတွေဟာ သာမန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးခုံမှာလည်းအမွှေးအမျှင်စတင်ပေါက်လာတတ်ပြီး လက်၊ ခြေထောက်တွေမှာလည်း အမွှေးပေါက်လာတာမျိုးသတိထားမိတတ်ကြပါတယ်။
အပျိုဖော်စတင်ဝင်ပြီးတစ်နှစ်ခန့် သို့ နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ တွေ့ရမယ့်လက္ခဏာတွေကတော့ –
ဆီးခုံမွှေးများပိုထူ၊ ပိုကြမ်းပြီး ပိုကောက်လာတယ်။
ချိုင်းမွှေးများပေါက်လာတတ်ပြီး နှုတ်ခမ်းအပေါ်လိုမျိုး တခြားနေရာတွေမှာပါ အမွှေးအမျှင်တွေပေါက်လာတာ ကြုံကောင်းကြုံရနိုင်ပြီး ဒါဟာပုံမှန်ဖြစ်တယ်။
အရပ်ရှည်လာပြီး အပျိုဖော်ဝင်ပြီး တစ်နှစ် သို့ နှစ်နှစ်မှာ ၅- ၇.၅ စင်တီမီတာခန့်ရှည်လာပြီး လူကြီးအရပ်ဖြစ်လာတယ်။
ခန္ဓါကိုယ်ပုံစံပြောင်းလာတာနဲ့အမျှ အလေးချိန်လည်းတက်လာတတ်ပါတယ်။ လက်မောင်း၊ ပေါင်၊ ကျောဘက်မှာ အဆီပိုများလာပြီး ခါးကျဉ်းကာတင်ကားလာပါတယ်။
ပထမဆုံးသတိပြုမိတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ ယောက်ျားအင်္ဂါပိုမိုကြီးထွားလာပြီး ကပ်ပယ်အိတ်ပါးကာ နီလာပါတယ်။
လူပျိုဖော်စတင်ဝင်ပြီးတစ်နှစ်ခန့် သို့ နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ တွေ့ရမယ့်လက္ခဏာတွေကတော့ –
ဆီးခုံမွှေးများပိုထူပြီး ပိုကြမ်း၊ ပိုကောက်လာပါတယ်။
ရင်ဘက်ခေတ္တအနည်းငယ်စူလာနိုင်ပြီး ပုံမှန်ဖြစ်ကာ၊ အမျိုးသားမှာရင်သားရှိခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
အရပ်ရှည်လာပါတယ်။ တစ်နှစ်မှာ ၇-၈ စင်တီမီတာလောက်ပိုရှည်လာကာ၊ ကြွက်သားများပိုမိုဖွံ့ထွားလာပါတယ်။
မျိုးပွားအင်္ဂါပြည့်စုံစွာဖွံ့ဖြိုးပြီး ဆီးခုံမွှေးများ ပေါင်ခြံအတွင်းပိုင်းထိပျံ့နှံ့ပေါက်လာတယ်။
အရှိန်နှေးနှေးနဲ့အရပ်ထွက်ပြီး အသက် ၁၆ ဝန်းကျင်လောက်မှာအရပ်ရှည်တာရပ်သွားတတ်တယ်။ (ကြွက်သားများကတော့ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါတယ်)
အသက် ၁၈ ဝန်းကျင်လောက်မှာ ပြည့်စုံစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။
အရွယ်ရောက်ခြင်းဟာ ကလေးငယ်တွေအတွက် ခက်ခဲတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ မိမိကိုယ်ကိုသတိထားမိလာတဲ့အချိန်မှာ ခန္ဓါကိုယ်ကပြောင်းလဲမှုတွေ၊ ဥပမာ ခန္ဓါကိုယ်အနံ့၊ ဝက်ခြံများ စသည်တို့ကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရချိန်ဖြစ်တယ်။
ခံစားမှုအသစ်တွေဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တာကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုခံစားမှုတွေကြောင့်ပဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုတွေလည်းရှိလာတယ်
ဖော်ပြထားတဲ့လက္ခဏာတွေအပြင် တခြားလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်တာကြောင့် စိတ်ပူသည်များရှိပါက ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
စောစီးစွာ (အသက် ၈ နှစ်အောက်)၊ သို့ နောက်ကျပြီး (အသက် ၁၄ ထက်) မှလူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော်စဝင်ရင်တော့ ဆရာဝန်ပြသင့်နေပါပြီ။
Puberty (လူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်း သို့ အရွယ်ရောက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အရွယ်ရောက်ခြင်းဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် ခန္ဓါကိုယ်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုထိန်းချုပ်တဲ့အရာမှာ ဦးနှောက်အတွင်းမှ Hypothalamus လို့ခေါ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအသေးလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ထို Hypothalamus မှ GnRH လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးကိုထုတ်တယ်။ ထိုဟော်မုန်းက Hypothalamus အောက်မှာကပ်နေသော Pituitary gland လို့ခေါ်တဲ့ ပဲစေ့သာသာ ဂလမ်းလေးတစ်ခုကိုအားပေးပြီး LH နဲ့ FSH ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးထွက်စေတယ်။ ထိုဟော်မုန်းနှစ်မျိုးက အမျိုးသား အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါတွေကိုသက်ဆိုင်ရာ အဖို အမဟော်မုန်းတွေထုတ်စေပြီး ခန္ဓါကိုယ်မှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။
Puberty (လူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်း သို့ အရွယ်ရောက်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
မိန်းကလေးဖြစ်ခြင်း ၊ မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေထက်ပိုမြန်မြန်အရွယ်ရောက်ပါတယ်။
အာဖရိက၊ အမေရိကလူမျိုးတွေဟာ ပိုစောစီးစွာအရွယ်ရောက်လေ့ရှိတယ်။
အဝလွန်ခြင်း၊ အဝလွန်ပါက စောစီးစွာအရွယ်ရောက်နိုင်ချေများပါတယ်။
အဖို၊ အမဟော်မုန်းနှင့်ထိတွေ့မိခြင်း။ အဖိုအမဟော်မုန်းပါသောအရာများ၊ လိမ်းဆေး စသည်ကိုထိတွေ့မိပါက စောစီးစွာအရွယ်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာများရှိခြင်း ၊ McCune-Albright ဟုခေါ်သောရောဂါရှိခြင်း၊ အဖိုဟော်မုန်း androgen အထုတ်များသောမျိုးရိုးလိုက်ရောဂါတစ်မျိုးရှိခြင်း တို့ကြောင့်လည်း စောစီးစွာအရွယ်ရောက်နိုင်တယ်။ ရှားရှားပါးပါးတခါတလေ သိုင်းရွိုက်နည်းခြင်းကြောင့်လည်း စောစီးစွာလူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော်ဝင်နိုင်ပါတယ်။
ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်တွင် ဓါတ်ရောင်ခြည်ထိဖူးခြင်း။ အကျိတ်၊ သွေးကင်ဆာ ၊ တခြားရောဂါများအတွက်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှု ခံယူထားဖူးပါက စောစီးစွာအရွယ်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Pituitary gland ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း
Puberty (လူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်း သို့ အရွယ်ရောက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ကလေးငယ်တွေလူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော်ဝင်သလားသိဖို့ ကလေးဆရာဝန်ကအောက်ပါအချက်တွေကို စစ်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
မိန်းကလေးတွေမှာ – ဆီးခုံမွှေးနဲ့၊ ရင်သားဖွံ့ဖြိုးမှု။
ယောက်ျားလေးတွေမှာ – ဆီးခုံမွှေး နဲ့ ယောက်ျားအင်္ဂါဖွံ့ဖြိုးမှု ။
စစ်ဆေးပြီး အဆင့်ငါးဆင့်ရှိတဲ့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့တိုက်ကြည့်ကာ မည်မျှဖွံ့ဖြိုးနေပြီကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
သွေးစစ်ခြင်း – အဖို၊ အမ ဟော်မုန်းများ၊ သိုင်းရွိုက်၊ ဆာလဖိတ် စသည်တို့ကိုသွေးတွင်းပမာဏစစ်ဆေးခြင်း။
ကလေးငယ်ရဲ့အရွယ်ရောက်ခြင်းက gonadotropin ဟော်မုန်းအပေါ်မူတည်မှုရှိမရှိသိရန် gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRH) stimulation test စစ်ဆေးခြင်း။
မွေးရောပါ အဖိုဟော်မုန်းထုတ်သောရောဂါရှိမရှိသိရန် သွေးတွင်း-hydroxyprogesterone စစ်ဆေးခြင်း
အောက်ပါစစ်ဆေးမှုများနဲ့ အလုံးအကျိတ်များ၊ ပုံမမှန်မှုများကိုလည်းရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
အယ်လ်ထရာဆောင်း နှင့် မျိုးပွားအင်္ဂါများစစ်ဆေးခြင်း။ အယ်လ်ထရာဆောင်းဟာနာကျင်မှုမရှိဘဲ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများနဲ့ သွေးကြောများ၊ တစ်သျူးများကို ပုံရိပ်ဖော်ပေးနိုင်ပါတယ်ု။
MRI- သံလိုက်ဓါတ်မှန် – ဦးနှောက်နဲ့ Pituitary gland ကို တိကျတဲ့ပုံရိပ်ဖော်ပြီးကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်တယ်။
Pituitary gland ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုရှိမရှိအတွက် သွေးစစ်မှု
ဦးနှောက်နှင့် pituitary gland ကိုသံလိုက်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း
Puberty (လူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်း သို့ အရွယ်ရောက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
စောစီးစွာအရွယ်ရောက်ခြင်းအတွက် ကလေးတိုင်းမှာ ကုသဖို့မလိုပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အချိန်အနည်းငယ်စောခြင်းဟာ ကုသရန်မလိုပါဘူး။ ကုသမှုရဲ့ဦးတည်ချက်က ကြီးထွားမှုစောစီးစွာရပ်ခြင်း၊ လှီနေခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ လိင်စိတ်ကြောင့်လူမှုရေးပြဿနာတွေမဖြစ်အောင် အဖိုအမဟော်မုန်းထုတ်ခြင်းကို တားဆီးဖို့သာဖြစ်ပါ်တယ်။
စောစီးစွာအရွယ်ရောက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပါက အကြောင်းအရင်းကိုအရင်ရပ်တန့်ဖို့လိုပါတယ်။ စောစီးစွာအရွယ်ရောက်ခြင်းကို ဟော်မုန်းတွေကိုတားဆီးခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ GnRH agonists များကိုသုံးကာ တားဆီးနုငိပါတယ်။ ထိုဆေးများကိုထိုးခြင်းဖြင့် LH, FSH ကဲ့သို့ဟော်မုန်းများထွက်ခြင်းကို တားဆီးနိုင်တယ်။
အရွယ်ရောက်ခြင်းနှောင့်နှေးတာဟာ ပြဿနာအရင်းအမြစ်ပေါ်လိုက်ပြီး ကုသမှုကွဲပြားနိုင်ပေမယ့်
အမျိုးသားတွေမှာ အဖိုဟော်မုန်းထိုးခြင်း၊ ဂျယ်လ်သုံးခြင်း၊ အရေပြားပေါ်ကပ်ခြင်း
အမျိုးသမီးတွေမှာ အမဟော်မုန်းသောက်ခြင်း၊ အရေပြားပေါ်ကပ်ခြင်းတို့ဖြင့်ကုသနိုင်တယ်။
https://medlineplus.gov/puberty.html. Accessed October 3, 2016.
http://www.medicinenet.com/puberty/page2.html. Accessed October 3, 2016.
All About Puberty.
http://kidshealth.org/en/kids/puberty.html#. Accessed October 3, 2016.
http://www.nhs.uk/Livewell/puberty/Pages/puberty-signs.aspx. Accessed October 3, 2016.